အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့အခါ စကားပြောကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့တော့ အရေးစွမ်းရည် တိုးတတ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စာရေးတတ်ဖို့က ခက်ခဲတယ်မဟုတ်လား။
စကားပြောကျွမ်းကျင်တာတစ်ခုထဲဆိုရင်တော့ ခရီးသွားတာမျိုးတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေပေမယ့် ရုံးတွင်းပိုင်း report ရေးရမယ့်အချိန် presentation လုပ်ရမယ့် အခါ ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ grammar ကျကျ စနစ်တကျရေးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ writing skill တိုးတက် လာဖို့ ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Speaking skill တိုးတက်ချင်ရင် ပြောနေဖို့ လိုအပ်သလို writing skill တိုးတက်လာစေချင်ရင်လည်း ရေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လို အနည်းဆုံးတစ်ကြောင်း လောက်တော့ ရေးဖြစ်အောင် ရေးသင့်ပါတယ်။ ဘာရေးရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တောင် ဒီနေ့အတွက် သင်ကြုံခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ချရေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အရမ်းကြီးခက်ခဲတဲ့ grammar ပုံစံတွေကို မစဉ်းစားပဲနဲ့ simple form နဲ့ပဲရေးကြည့်ပါ။
၂. ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း ပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင်က အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို တက်နေတဲ့သူဆိုရင် သင်ရဲ့ဆရာတွေကို ရေးထားတဲ့အရေးအသားတွေ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးပေးဖို့ အကူအညီတောင်း သင့်ပါတယ်။ ဒီ website လေးတွေမှာလည်း ကိုယ်ရဲ့အရေးအသားမှာ အမှားတွေရှိမရှိ စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ www.italki.com နဲ့ www.lang-8.com တို့မှာ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
၃. အမှားကနေ ပြန်လည်သင်ယူပါ။
အမှားဆိုတာ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ မှားမှာကို မကြောက်ပါနဲ့။ အမှားကနေ သင်ရရှိလိုက်တဲ့အမှန်က ပိုပြီးတော့ သင့်ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေမှာပါ။ ဒီတိုင်းလေ့ကျင့်ရမှာ ပျင်းတယ်ဆိုရင် ဂိမ်းလေးဆော့ပြီး လေ့ကျင့်တာကလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ flashcard တွေနဲ့လေ့ကျင့်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီ Anki ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ။ grammar နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ link ထဲကို ဝင်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၄. ဝေါဟာရကြွယ်ဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ဝေါဟာရဆိုတဲ့နေရာမှာ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းလည်း သုံးသလို အီဒီယမ်တွေလိုမျိုး အတွဲလိုက်ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တဲ့ စကားစုတွေကိုလည်း လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်က စီးပွါးရေးနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင် business english အသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း လေ့လာထားဖို့ လိုပါတယ်။ စကားလုံးကဒီတစ်လုံးထဲဆိုပေမယ့် အသုံးပြုတဲ့နယ်ပယ်မတူတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲသွား တတ်ပါတယ်။ computer term, medical term, business term စသဖြင့်ပေါ့။ ဝေါဟာရကြွယ်မှလည်း ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာက လှပပြီး အသက်ဝင်အောင် ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာရေးတဲ့အခါမှာတောင် ကိုယ်ပြောချင်တာကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့စာဖြစ်ဖို့ ဝေါဟာရ တွေကို အများကြီးစဉ်းစားရတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားတောင် ဝေါဟာရကြွယ်ဝဖို့ စာဖတ်နေရတယ်ဆိုရင် ဒုတိယဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် စာတွေ အများကြီးဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ တခြားသူတွေရဲ့ အရေးအသားတွေ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာခွင့်ရပြီး ပိုပြီးကောင်းတဲ့စာတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
Source;perfect english grammar
Read 493 times Last modified on Thursday, 11 April 2019 17:17
to improve english writing skill
ဆရာ၊ ဆရာမများ သင်ကြားရာတွင် ထိရောက်စေမယ့် အချက်များ
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါ စဉ်းစားဖို့ မေ့လျော့နေတဲ့အချက်တွေ
သတင်းဆိုးတွေကို အရင်းခံပြီး အောင်မြင်မှုရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူ
ပြင်သစ်နိုင်ငံကျောင်းများတွင် စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအား ဥပဒေထုတ်ပြန်၍ တားမြစ်လိုက်ပြီ
Thet Sann Yay